Fahafatesana Nampiahiahy Tovovavy Niteraka Hetsi-Panoherana Tsy Fahita Firy Ao Beijing · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2013 21:44 GMT
Olona an'arivony no nidina an-dalamben'i Beijing tamin'ny 8 Mey 2013, ho setrinan'ny fahafatesana mampiahiahin'ilay tovovavy mpiasa nifindra monina antsoina hoeYuan Liya. Amin'izao fotoana izao moa ny vaovao mifandraika amin'ny fahafatesan'i Yuan Liya dia tsy misy hita an-tserasera intsony ao Shina.
Hita nivalampatra teo ivelan'ny Tsenambarotra Wenjing tokony ho misasakalin'ny 3 mey ny vatana mangatsiakan'ilay tovovavy 22 taona. Tonga tao Beijing i Yuan hitady asa ho fanohanana ny fianakaviany any Anhui. Samy nitaky ny amoahan'ny polisy ny rakitsarin'ny kamerà mpanara-maso ahitana ny fahafatesan'i Yuan na ny sipany na ny reniny. Saingy, nilaza ny polisy fa famonoan-tena no nisy tamin'ity raharaha ity ka nandà ny hanohy ny famotorana ry zareo.
Ny ankamaroan'ireo mpanao fihetsikatsehana an'arivony dia mpifindra monina avy any amin'ny faritany Anhui izay miasa ao Beijing. Eto ambany ny lahatsarin'ny olo-tsotra iray mampiseho ny hetsi-panoherana:
Nisy lahatsoratra nitondra ny lohateny hoe “Fahafatesan-jazavavy feno misitery tao Wenjing” nivezivezy an-tserasera tamin'ny 7 mey saingy voafafan'ny mpanivan'ny aterineto haingana izany. Araka ny Vaovaon'ny Trano [zh], izay miorina any Hong Kong, nilaza ny lahatsoratra fa tao anatin'ny efitrano iray niaraka tamin'ny lehilahy maromaro i Yuan nialoha ny nahitana ny vatany teo ivelan'ny tsenambarotra teo an-tsisin-dalana ambanin'ilay efitrano. Voafafa avokoa ny ankamaroan'ny lahatsoratra nakan-kevitra. Ny eto ambany dia ireo sisa voarakitra tamin'ny adihevitra nivoaka tamin'ilay lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Dinika Baidu [zh]:
Yuan Liya. Via House News. Tsy azo ampiasaina amin'ny varotra.
“Trondro Nivoaka ny Rano”: Ny honohono dia ireo mpiambina no nanao an'io. Nandositra ny sasany amin'izy ireo ary nitolo-batana tamin'ny polisy ny iray. Tokony hivoaka haingana ny marina. Saingy mety ho tratran'ny kolikoly ny polisy dia tsy nisy ny mpanango-baovao nanaraka ny raharaha. Matahotra valifaty ry zareo…
“Tsy Mahandry Hatramin'ny Lohataona Aho” : Rahoviana no hahatandro ain'olona araka ny tokony ho izy? Lasa tsy misy vidiny ny aina iray rehefa tsy an'olona manankarena sy manana fahefana?
“Masoandro 67799″: Tsy maintsy mangady ny zavamisy rehetra isika. Araka ny famelabelaran'ny lahatsoratra, na dia nitsambikina samirery ny varavarankely noho ny nahimpony aza izy, dia novonoina (satria niezaka ny handositra fanolanana izy).
“Teny Matanjaka”: Tokony asehon-dry zareo hoe iza ireo lehilahy tao amin'ny efitrano. Mihevitra aho fa afa-mamoaka ny marina ny mpiserasera.
“Menàra”: Maty ilay zazavavy dia mbola te-hanafina ny marina ihany ianao. Fa tontolo manao ahoana ity iainantsika ankehitriny ity? Miaina ao amin'ny tontolon'ny Les Miserables.
Ho setrin'ny hetsi-panoherana, nanazava ny famotorana nataony ao amin'ny Sina Weibo [jpg, zh] ny polisin'i Beijing:
Taorian'ny famotorana, fanadihadiana ary ny fijerena ny kamerà mpanara-maso teo amin'ny toerana nisian'ny fahafatesana, niditra tao amin'ny tsenambarotra ilay olona [Yuan] ny takarivan'ny 2 Mey ary nianjera avy ao amin'ny tsenambarotra tokony ho tamin'ny dimy maraina. Tsy nahita porofo izahay fa nifampikasokasoka tamin'olon-kafa izy. Tsy nisy ny zavatra nampiahiahy teo amin'ny toerana nahafatesany sy tamin'ny vatan'ny maty. Mbola manatontosa ny andraikiny ny polisy amin'izao fotoana izao.
Saingy tsy nitokisan'ny polisy ny navoakan'ny polisy. Maro ny fanontanian'ny mpamahana bolongana bitika eo amin'ny sehatra fanehoan-kevitra [zh]:
“Winxutu”: Raha marina ny honohono fa manana mpiaro matanjaka [ilay tsenambarotra], sady fitaovan'ny fitondrana, matahotra izany mpiaro izany ianareo, mpiaro tahaka ny ahoana no afa-mikitika ny polisy? l******a!
“Manangana Sehatra”: Milaza ny tsaho fa naolana lehilahy mpiambina dimy ilay zazavavy. nampitsahatra ny famotorana ny polisy satria manana mpiaro matanjaka ny tompon'ilay tsenambarotra. Nodorana tsy misy fanadihadiana ny vatana mangatsiaka. Nangataka ny rakitsarin'ny kamerà mpanara-maso ny sipan'ilay tovovavy fa novalin'ny polisy fa tsy havany mivantana. Nangataka ny rakitsary ny reniny dia nolazain-dry zareo fa tsy hisy ny fanadihadiana satria famonoan-tena no nitranga. Raharaha goavana tahaka izany fa tsy nisy fampitam-baovaovniresaka momba ilay izy. Nosivan'iny bilaogy bitika Shinoa ny teny fitadiavana rehetra mifandraika amin'ilay raharaha. Voakolikoly loatra. Ankehitriny olona an-jatony no maneho ny fanoherany dia andefasanareo angidimby.
“Fahadiovana Very”: Tsy nisy zava-nampiahiahy hita? Valo ny zavatra mampiahiahy. Voalohany: Tsy misy marika na antony hamonoany tena. Araka ny nolazain'ny namany, tao tsara izy raha nandeha ho any amin'ny tsenambarotra ny 2 Mey sy ny hafatra nalefany tokony ho tamin'ny iray folakandro. Ao tsara ny hafatra nalefany ho an'ny sipany. Milamina tsara ny fifandraisany amin'ny sipany. Tsy misy antony tokony hamonoany tena. Faharoa: Inona no ijanonany mandritra ny alina ao amin'ny tsenambarotra Wenjing mialoha ny itsambikinany? …
“You Yizhizhu”: Fanotaniana vitsivitsy: 1. Nikiry ny fianakaviny niteny fa naolana sy novonoina izy; ny polisy niteny fa tsy nifampikasokasoka tamin'iza na iza izy. 2. Ny polisy niteny fa ny [ao amin'ny] fakantsary fanaraha-maso no porofo ananany . Maninona no tsy afa-mijery ny lahatsary ny fianakaviana? 3. Raha tsy misy ny zavatra mampiahiahy, ahoana no nahatonga olona maro midina an-dalambe manohitra sy ny nandefasana polisy mitam-piadiana sy voromby teny amin'ny toerana nisian'ny hetsika? 4. Nahoana no voafafa sy voasivana avokoa ny resaka an-tserasera rehetra?
“Ashenyi”: Avoahy ho hita masoandro ny fampahafantarana rehetra hinoan'ny vahoaka azy!
“Youyouziluo”: Vahaolana: 1. Avoahy ho hita any amin'ny sehatry ny fampitam-baovaon'olotsotra sy ny fianakavian'ny mana-manjò ny voarakitry ny kamerà fanarahamaso; 2. Avelao ny fianakaviana sy ny media hanara-maso ny fandidiam-paty ho fanadihadiana; 3. Tsy tokony hisy ny fehin-teny mandra-pivoakan'ny tatitra rehetra. Ny karazana fehinteny mikendry hampangina ny olona no vao maika hiteraka fahatezerana kokoa.
“120TC”: Raha famonoan-tena, nahoana no voasakana sy voasivana avokoa ny vaovao sy ny adi-hevitra?
Namoaka fanambarana ofisialy hafa ny polisin'i Beijing io maraina io fa navoakan'ny porofo rehetra fa noho ny fitsambikinan'i Yuan avy amin'ny tranoavo no niteraka ny fahafatesany ary tsy nanohitra ny tatitry ny polisy ny fianakaviana. Saingy mailaka ny mpiserasera hanasongadina ny teny hafahafa tao amin'ny nosoratan'ny polisy:
“Chen Ming”: “Fahafatesana vokatry ny fianjerana-samirery avy eny amin'ny avo” ve no voambolana araka ny lalàna sa fomba fiteny amin'ny famotorana raharaha heloka bevava? Inona no tena dikany? Misy filaza na lalàna azontsika hojerena?